Nooca cusub ee COVID-19 Omicron wuxuu joogaa UK, Belgium, Germany, Netherlands iyo Czech Republic hadda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Yurub » Nooca cusub ee COVID-19 Omicron wuxuu joogaa UK, Belgium, Germany, Netherlands iyo Czech Republic hadda
Airlines • Airport • Aviation • Belgium War Deg Deg Ah • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Czechia Breaking News • Jarmalka Jebinta Wararka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Wararka Nederland • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka UK
Boqortooyada Midowday (UK) waxay diiwaangelisay labadii kiis ee ugu horreeyay nooc cusub oo Omicron ah oo COVID-19 ah maalin kadib markii kiiskii ugu horreeyay ee nooca, oo saynisyahannadu ay tuhunsan yihiin inuu aad u faafayo, laga duubay Yurub.
Maanta, afhayeen u hadlay Wasaaradda Caafimaadka Czech ayaa ku dhawaaqay in haweeney ka soo laabatay fasaxa Masar ay tijaabisay wax la rumeysan yahay inuu yahay nooca cusub ee COVID-19. Waxa uu intaa ku daray in muunaddaasi si dheeraad ah loo darsay, iyadoo la filayo in si rasmi ah loo xaqiijiyo subaxnimada Axadda.
Maamulka Belgian iyo Jarmalka ayaa sidoo kale si rasmi ah u xaqiijinaya imaatinka Omicron ee qaaradda Yurub.
Wasiirka arrimaha bulshada iyo is-dhexgalka Kai Klose, oo ka tirsan Jamhuuriyadda Czech. GermanyGobolka Hesse, ayaa bartiisa twitter-ka ku soo qoray in "Ka duwanaanshaha Omicron, oo leh heer aad u sarreeya, oo suurtagal ah, uu horeyba u yimid Jarmalka." Klose ayaa shaaca ka qaaday in "isbeddello badan oo caadi ah oo Omicron ah laga helay qof ka yimid Koonfur Afrika" habeenkii Jimcaha. Shakhsiga waxa la dhigay karantiil inta laga helayo isku xigxiga dhammaystiran ee fayraska laga helay muunadooda.
Maamulka Nederlaan ayaa wajahaya tiro badan oo looga shakisan yahay kiisas Omicron Jimcihii, markii 61 qof oo yimid Amsterdam oo ka yimid Koonfur Afrika laga helay COVID-19. Dadka safarka ah ayaa laga soo kaxeeyay garoonka, waxaana la geeyay hotel ku dhow, waxaana lagu go’doomiyay halkaasi. Wasaaradda caafimaadka Nederlaand waxay sheegtay in muunado la daraaseeyay “sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah [si loo arko] inay yihiin nooca cusub ee walaaca, oo hadda loo yaqaan 'Omicron'.
Horaantii maalintaas, dawladda Nederlaan waxay mamnuucday dhammaan duullimaadyada hawada ee ka imanaya Koonfur Afrika halkaasoo markii ugu horreysay laga helay nooc cusub. Rakaabkii labadii duullimaad ee u dambeeyay ee halkaas ka soo dagay waxay ku qasbanaadeen inay saacado ku qaataan dhabbaha ay diyaaraduhu ka duulaan, iyagoo sugaya in la tijaabiyo.
Belgium waxay leedahay farqiga shakiga leh ee ah inuu yahay waddankii ugu horreeyay ee Yurub ee si rasmi ah u xaqiijiya kiiska Omicron. Wasiirka caafimaadka ee dalka, Frank Vandenbroucke, ayaa ku dhawaaqay Khamiista in bukaanka cudurka qaba uu yahay qof aan la tallaalin oo laga helay COVID-19 Noofambar 22. Sida laga soo xigtay madaxa virologist ee Belgium, Mark Van Ranst, fasax-bixiye ayaa mar hore ka soo laabtay Masar.
Shalay, the Xarunta Yurub ee Ka Hortagga iyo Xakamaynta Cudurrada (ECDC) ayaa ka digay in ay wali jirto "hubnaan la'aan la taaban karo oo la xiriirta gudbinta, waxtarka tallaalka, khatarta caabuqa iyo sifooyinka kale ee noocyada Omicron." Maamulka caafimaadka ee EU-da ayaa culayska ku tilmaamay khatar "sare iyo mid aad u sareysa".
Isla maalintaas, dhammaan 27-ka waddan ee xubnaha ka ah Midowga Yurub waxay ku heshiiyeen in si ku-meel-gaar ah loo joojiyo safarka hawada ee toddobada waddan ee koonfurta Afrika. UK, US iyo Canada ayaa sidoo kale soo rogay xayiraado la mid ah.